Followers Answers – SAGARWINE
Home/ Than_Htyke_Zaw/Followers Answers
Asked: 12 May 2021 In: ပဟေဠိ
Ye Tay Zar Shein We can build together
Added an answer on 14 Jul 2021 at 10:32 AM
Replied to answer on 21 Nov 2020 at 9:45 AM
Added an answer on 21 Nov 2020 at 9:44 AM
လက်ရှိငွေ =၁၀ ကျပ် အိမ်မပြန်ခင်ရှိငွေ =၂၀ ကျပ် ညစာထမင်းဖိုးမရှင်းခင်ရှိငွေ =၄၀ ကျပ် ညစာထမ်းမစားခင်ရှိငွေ =၅၀ ကျပ် သူငယ်ချင်းကို မကူညီခင်ရှိငွေ =၁၀၀ ကျပ် သူငယ်ချင်းထံ မသွားခင်ရှိငွေ =၁၁၀ ကျပ် ဒဏ်ငွေမဆောင်ခင်ရှိငွေ =၂၂၀ ကျပ် နံနက်စာမစားခင်ရှိငွေ =၂၃၀ ကျပ် လောင်းကစားဝိုင်းတွင် မရှုံးခင်ရှိငွေ = အိမ်မှမRead more
လက်ရှိငွေ =၁၀ ကျပ်
အိမ်မပြန်ခင်ရှိငွေ =၂၀ ကျပ်
ညစာထမင်းဖိုးမရှင်းခင်ရှိငွေ =၄၀ ကျပ်
ညစာထမ်းမစားခင်ရှိငွေ =၅၀ ကျပ်
သူငယ်ချင်းကို မကူညီခင်ရှိငွေ =၁၀၀ ကျပ်
သူငယ်ချင်းထံ မသွားခင်ရှိငွေ =၁၁၀ ကျပ်
ဒဏ်ငွေမဆောင်ခင်ရှိငွေ =၂၂၀ ကျပ်
နံနက်စာမစားခင်ရှိငွေ =၂၃၀ ကျပ်
လောင်းကစားဝိုင်းတွင် မရှုံးခင်ရှိငွေ = အိမ်မှမထွက်ခင်ရှိငွေ ၄၆၀ ကျပ်
Asked: 15 Nov 2020 In: ပဟေဠိ
Added an answer on 17 Nov 2020 at 8:05 PM
ကျွန်တော် အိမ်အပြင်က စောင့်နေပါတယ်။ ပါမောက္ခရဲ့ စာဖတ်ခန်းအပြင်က ဖြတ်သွားတဲ့အခါ သူက ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို ထုတ်ပြီး နဖူးနဲ့တေ့ကာ သူ့ကိုယ်သူ ပစ်သတ်ဖို့ကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် စာကြည့်ခန်းထဲ ရောက်တော့ မှောင်မည်းနေလို့ လျှပ်စစ်မီးခလုတ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်၊ ဒီတော့ တယ်လီဖုန်းထားတဲ့ နေရာကို တွေ့ပါတယ်။ ရှေ့Read more
ကျွန်တော် အိမ်အပြင်က စောင့်နေပါတယ်။ ပါမောက္ခရဲ့ စာဖတ်ခန်းအပြင်က ဖြတ်သွားတဲ့အခါ သူက ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို ထုတ်ပြီး နဖူးနဲ့တေ့ကာ သူ့ကိုယ်သူ ပစ်သတ်ဖို့ကို တွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် စာကြည့်ခန်းထဲ ရောက်တော့ မှောင်မည်းနေလို့ လျှပ်စစ်မီးခလုတ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်၊ ဒီတော့ တယ်လီဖုန်းထားတဲ့ နေရာကို တွေ့ပါတယ်။
ရှေ့ နောက် ကိုက်ညီမှု မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
Asked: 07 Nov 2020 In: ပဟေဠိ
How many 3’s in the image?
Added an answer on 12 Nov 2020 at 11:54 PM
Asked: 04 Nov 2020 In: နိုင်ငံရေး
Added an answer on 12 Nov 2020 at 11:52 PM
Ref : Google
Added an answer on 12 Nov 2020 at 11:49 PM
Asked: 08 Oct 2020 In: General Knowledge
Added an answer on 09 Oct 2020 at 6:49 PM
I think 0.44 Viss in 1 Liter.
Asked: 17 Sep 2020 In: ဥပဒေ
Replied to answer on 02 Oct 2020 at 10:40 AM
Added an answer on 01 Oct 2020 at 2:22 PM
နေ့ နှင့် ည ( နေ ၊ လ)
Apple Events in October 13, 2020. iPhone 12?